ဝီကီပီးဒီးယား သုည - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဝီကီပီးဒီးယားအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားသော ပ
ဝီကီပီးဒီးယား သုည (အင်္ဂလိပ်: Wikipedia Zero) သည် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဝီကီပီးဒီးယားအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားသော ပရောဂျက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် အခကြေးငွေမပေးရဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။အစီအစဉ်အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ယင်းအတွက် ဆုရရှိခဲ့သည်။ဤအစီစဉ်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အသိပညာဗဟုသုတအား အခကြေးငွေပေးစရာမလိုဘဲ လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဝီကီပီဒီးယား သုည လိုဂို
တယ်လီနောဖြင့် ဝီကီပီးဒီးယားအား အခကြေးငွေမပေးရဘဲ ကြည့်နိုင်ပုံ
ဖေ့ဘွတ် သုညသည် ဝီကီပီးဒီးယား သုညအား နမူနာယူ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် မိုဘိုင်းကွန်ယက်များ
ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် နိုင်ငံများပြ မြေပုံ (၂၀၁၆ မေလ)
အောက်ပါတို့သည် ဝီကီပီးဒီးယား သုည စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် သမိုင်းကြောင်း အချို့ ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် မိုဘိုင်းကွန်ယက်များနှင့် စတင်သည့်နေ့ရက်များအတွက် Wikimedia Foundation: mobile network partners ကို ကြည့်ပါ။
မေ ၂၀၁၂ - မလေးရှားနိုင်ငံ တွင် Digi Telecommunications နှင့် ပူးပေါင်း၍
၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ - ကင်ညာနိုင်ငံတွင် Orange S.A. နှင့် ပူးပေါင်း၍
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ - ထိုင်းနိုင်ငံတွင် dtac; ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် ဆော်ဒီတယ်လီကွန်း ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍
မေ ၂၀၁၄ - ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် Mobilink နှင့် ပူးပေါင်း၍ 
ဇွန် ၂၀၁၃ - သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် Dialog Axiata နှင့် ပူးပေါင်း၍
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃ - ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွင် Umniah; ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် Banglalink နှင့် ပူးပေါင်း၍
ဧပြီ ၂၀၁၄ - ကိုဆိုဗိုတွင် IPKO ကွန်ယက်ပေါ်မှ
မေ ၂၀၁၄ - နီပေါနိုင်ငံတွင် Ncell; ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံတွင် Beeline နှင့် ပူးပေါင်း၍
မေ ၂၀၁၄ - နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင် Airtel Nigeria နှင့် ပူးပေါင်း၍ 
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ - ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင် Kyivstar နှင့် ပူးပေါင်း၍
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄ - ဂါနာနိုင်ငံတွင် MTN Ghana နှင့် ပူးပေါင်း၍
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄ - မြန်မာနိုင်ငံတွင် တယ်လီနောနှင့် ပူးပေါင်း၍
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄ - အင်ဂိုလာနိုင်ငံတွင် Unitel S.A. နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဝီကီပီးဒီးယား သုညကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ကြသည်။
Wikimedia Foundation: mobile network partners ကို ကြည့်ရှုပါ။
↑ Russell၊ Brandon။ "Wikipedia Zero Wants to Bring Wikipedia to Mobile Users WithoutaData Plan"၊ TechnoBuffalo၊ February 22, 2013။ April 8, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 December 2018။
↑ Wadhwa၊ Kul Takanao (February 22, 2013)။ Getting Wikipedia to the people who need it most။ Knight Foundation။4July 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ April 8, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sofge, Erik (March 8, 2013). "SXSW: Wikipedia for Non-Smartphones Is Brilliant. Here's Why". Retrieved on April 8, 2013.
↑ Riese၊ Monica။ "SXSW Interactive Awards Announced"၊ The Austin Chronicle၊ Austin, Texas: Austin Chronicle Corp.၊ March 12, 2013။ April 8, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dillon၊ Conon (December 18, 2013)။ Wikipedia Zero: free data if you can afford it။ January 15, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wikipedia Zero launches in Malaysia with Digi — Wikimedia blog။ Blog.wikimedia.org (2012-05-26)။ 2013-06-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mobilink brings Wikipedia Zero to Pakistan"၊ nation.com.pk။ 2013-06-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 June 2013။
↑ Mobilink brings Wikipedia Zero to Pakistan။ 16 August 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wikipedia FREE။ Dialog။ 2015-07-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tech Talk | Wikipedia Zero | A righteous initiative for accessing free knowledge။ Archive.thedailystar.net (2013-12-02)။ 2014-06-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Banglalink launches Wikipedia Zero :: Financial Express :: Financial Newspaper of Bangladesh။ Thefinancialexpress-bd.com။ 2014-06-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kosovo's Largest Foreign Investment Sets Tone for Innovation။ Hazlehurst Media SA။2May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wikipedia Zero arrives in Nepal via Ncell and you don’t have to payaPaisa to use it။ 12 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Beeline открыл бесплатный доступ к Wikipedia для своих абонентов။ 13 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wikimedia Foundation partners with Airtel Nigeria to offer free Wikipedia access to subscribers — TechCabal။
↑ Абоненти "Київстар" можуть користуватися Wikipedia з нульовим балансом на рахунку။ Kyivstar။ 2014-11-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "MTN Ghana empowers customers with free access to Wikipedia"၊ myjoyonline.com။ 23 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 December 2014။
↑ "MTN Ghana empowers customers with free access to Wikipedia"၊ myjoyonline.com၊ 22 December 2014။ December 24, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 December 2014။
↑ TelenorMyanmar — Free Wikipedia။ telenor.com.mm။ 19 January 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် Wikipedia Zero နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းရှိ Wikipedia Zero
ဝီကီပီးဒီးယား သုညအကြောင်း ဝီကီပီးဒီးယား ဘလော့ဂ်စာစုများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား_သုည&oldid=648607" မှ ရယူရန်
၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။